कोची प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
कोच्चि प्रान्त शिकोका टापुको दक्षिणपट्टि अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा शुद्ध नदीहरू, जंगली केपहरू, र प्रशान्त महासागरको दर्शनीय दृश्यहरूको साथ समुद्र तटहरू छन्। जापानमा धेरै युवाहरू यस वातावरणको लागि आतुर छन् र कोच्चिमा यात्रा गरिरहेका छन्। यदि तपाईं कोची जानुहुन्छ भने निश्चित रूपमा तपाईले आफ्नो यात्राको आनन्द उठाउनुहुनेछ।
कोची को नक्शा
विशाल शिकोकू पर्वत श्रृंखला कोच्चि प्रान्तको उत्तर तर्फ फैलिन्छ। यो प्रान्त पूरै क्षेत्रफलको is%% सहितको हिमाली क्षेत्र हो। यी हिमालहरूबाट नदीहरू बग्छन्। ती नदीहरूले अझै पनि बुढेसकालको जापानी नदीको वातावरण छोड्छन्।
पहाडहरुको दक्षिणी भागमा एक शानदार प्रशान्त महासागर छ। यदि तपाईं केपमा जानुभयो भने, तपाईं धेरै शक्तिशाली दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यस्तो वातावरणमा कोचीका मानिसहरूले समुद्र बाहिरका देशहरूबारे सोचेका थिए। १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा टोकुगावा शोगुनेटको युगको अन्त्य गरेर कोचीको समुराई जापानलाई आधुनिकीकरण गर्न धेरै सक्रिय थियो। तपाईं कोच्चि महल र समुद्री तटमा समुराईको समयहरूको छवि बनाउन सक्नुहुन्छ।
कोच्चि प्रान्तमा मौसम र मौसम
कोची प्रिफेक्चरमा धेरै घमाइलो दिनहरू हुन्छन्, तर एकै समयमा यो धेरै वर्षा हुन्छ।
कोची प्रिफेक्चरको वार्षिक घाम घण्टा २००० घण्टा भन्दा बढी छ र जापानको शीर्ष वर्ग हो। जहाँसम्म, अर्कोतर्फ, वार्षिक वर्षा मैदानहरूमा २ mm०० मिलिमिटर हुन्छ, र हिमालहरूमा 2000००० मिलिमिटर भन्दा बढी।
जब वर्षा हुन्छ शिमन्टो नदी जस्ता नदीहरू तीव्र रूपले माथि बढ्नेछन्। सत्य भन्नुपर्दा, म शिमन्टो नदीमा छाउनी लगें जब करिब २० वर्ष पहिले आँधी आयो र मलाई डर लाग्यो।
केप अशिजुरी र केप मुरोटो टाइफुनमा अत्यन्त खतरनाक हुन्छन्। कृपया सावधान रहनुहोस्।
कोची एयरपोर्ट कोच्चि शहरको १ 18 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। यस एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन हुन्छन्।
यो कोची एयरपोर्टबाट जेआर कोची स्टेशनको लागि बसबाट करीव minutes० मिनेट जति छ।
Shinkansen कोच्चि प्रान्तमा संचालित छैन। यस प्रान्तमा, निम्न रेलमार्गहरू संचालित छन्। यस बाहेक, कोची शहर मा ट्राम चलिरहेका छन्।
किनभने कोची प्रिफेक्चर धेरै ठूलो छ, रेलमा यात्रा गर्न समय लाग्छ।
तोसा कुरोशियो रेलवे
कोची कैसल पहाडमा छ (meters meters मिटर उचाई) कोच्चि मैदानको बीचमा। यो महल JR कोची स्टेशन बाट ट्राम द्वारा लगभग दस मिनेट छ।
कोच्चि महल १ Kaz११ मा भगवान काजुटोयो यमनौटीले निर्माण गरेका थिए। यो आगोको कारण १ 1611२1727 मा ध्वस्त भयो, तर यो १ 1749 XNUMX in मा पुनः निर्माण गरियो। महल टावरलगायत बाँकी रहेका काठका भवनहरू यस युगमा निर्माण भएका थिए।
जापानी महलका काठका धेरै भवनहरू आगो, बिजुलीको प्रहार, भूकम्प, आदिको कारण हराइसकेका छन्, तर त्यहाँ कोचीको महलमा धेरै बाँकी छन्। कोच्चि क्यासलमा केवल महल टावर मात्र होइन तर होमानुरू (भित्री गढी) को विशाल काठको भवन पनि बाँकी छ, त्यसैले तपाई समुराईको समयको वातावरण कडाईका साथ अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
>> कोच्चि क्यासलको विवरणहरूको लागि, कृपया कोची प्रान्तको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
शिमन्टो नदीमा माउन्टेन र लो-पानी क्रसिंग, शिमन्टो-शि, कोची प्रान्त, जापान- = शटरस्टक
शिमन्टो नदी कोची प्रान्तको पश्चिमी भागमा बग्ने सुन्दर नदी हो। यो १ 196 km किलोमिटर लामो छ र शिकोकोमा सबैभन्दा लामो नदी हो। यस नदीमा कुनै बाँध निर्माण गरिएको छैन। त्यसो भए, यदि तपाईं यहाँ आउनुभयो भने, तपाईं पुरानो जापानी परिदृश्यबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
शिमन्टो नदीमा धेरै जसो पुलहरूको कुनै बेल्टेज छैन। यी पुलहरू बाढीको बखत पानीमुनि हुनको लागि बनाइएको हो। यो बनाइएको छ कि पूल याद गर्न गाह्रो छ। यी पुलहरूलाई "लो-पानी क्रसिंग (जापानी भाषामा चिन्का-बाशी)" भनिन्छ। माथिको अन्तिम भिडियो भारी वर्षामा शिमन्टो नदी पुलको दृश्यको दृश्यबाट लिइएको हो।
मलाई यो नदी मनपर्‍यो र केहि समयको लागि मैले धेरै पटक भ्रमण गरें। यस नदीमा कुनै विशेष सजावट छैन। यद्यपि यो नदी दयाले भरिएको छ जुन मानिसहरूसँग निको पार्छ।
तपाईं शिमन्टो नदीमा खुशीको डु boat्गा चढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि क्यानोइ experience अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
>> शिमन्टो नदीको विवरणको लागि, कृपया शिमन्टो शहरको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
कोपिको केप अशिजुरी, जापान = शटरस्टक
यदि तपाईं शिमन्टो नदीमा जानुहुन्छ भने, तपाईं केप अशिजुरी किन भ्रमण गर्नुहुन्न?
केप अशिजुरी शिकोको दक्षिणपश्चिमी छेउमा छ। प्रशान्त महासागरमा पर्वतारोहणको उचाई meters० मिटर छ। यहाँबाट प्रशान्त महासागर धेरै उत्साहजनक छ। तपाईंले पृथ्वी गोलो छ भन्ने महसुस गर्नुपर्दछ।
यो लगभग १ घण्टा 1० मिनेट बस द्वारा नाकामुरा स्टेशनबाट केप अशिजुरी सम्म छ।
>> केप अशिजुरीको विवरणहरूको लागि, कृपया कोच्चि प्रान्तको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्